नेपालबाट एक साता अघि भारत फर्किएका युवा कोरोना सं’क्रमित ! «
नेपालबाट एक साता अघि भारत फर्किएका युवा कोरोना सं’क्रमित !
प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७६, आईतवार ०९:०२
नयाँदिल्ली, १६ चैत । नेपालबाट केही दिनअघि मात्र भारत फर्किएका एक युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । भारतको हरियाणा राज्यको अम्बाला शहरका ती २१ वर्षीय युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो । पटियाला नजिकको रामनगर गाउँका स्थायी बासिन्दा उनी अघिल्लो सातामात्र नेपालबाट फर्किएका थिए ।
‘उनी १९ मार्चमा नेपालबाट इण्डिगो एयरलाइन्सको विमान चढेर भारत आएका रहेछन् । परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको छ । अहिले उनको अवस्था भने सामान्य छ,’ डा. कुलदिपले भने ।
दिल्ली ओर्लिएपछि मेट्रोबाट कश्मिरी गेट पुगेर बस चढी उनी आफ्नो गाउँ रामनगर पुगेका थिए । गाउँ पुग्दासम्म पनि कुनै समस्या नभएको उनले फोनमा बताए । ‘९ देखि १९ मार्चसम्म नेपालमा थिएँ, त्यहाँ मलाई कुनै समस्या थिएन,’ उनले भने ।
२० देखि २६ मार्चसम्म उनी घरमै बसेका थिए । २६ मार्चमा चर्को ज्वरो र पेट दुख्ने भएपछि घरमै औषधि खाएका थिए । तर, पनि राम्ररी ठिक नभए पछि उनलाई नजिकैको सिटि सिभिल अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । जहाँ उनको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।
शनिबार राति आएको रिपोर्टमा उनमा कोरोना भाइरसको संक्रमरण रहेको पुष्टि भएको हो । उनलाई कोरोना लागेको पुष्टि भएपछि अहिले पुरै परिवार त्रसित बनेको छ । र, सबैलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ ।